Tsy misy marika ny mpanao ratsy
Mpadraharaha la vanille very 35 000 000 ariary
Indray alina monja dia najavona ny vola 35 000 000 ariary any ilay mpandrahara saika hividianana la vanille tany amin’ny kominina Ambinany Telo, Distirikan’ny Maroantsetra. Niray efitra fatoriana lay mpadraraha sy i TOTOMAEVA Faustin, lay naka an’ilay vola raha azo tory tanteraka lay mpadraharaha, ny 15 jolay. Fankafantatra sy mpiara-miasa izy roalahy eo amin’ny sehatry ny la vanilla.
Nahazo loharanom-baovao ny mpitandro ny filaminana ka nanao velam-pandrika nahasamborana ny olo-dratsy.
Tratran’ny zandrary tao amin’ny fonkotany Andranomadio, Toamasina, ny faha 31 jolay lasa iny, i TOTOMAEVA Faustin, lay nangalatra vola mitentina
35 000 000 ariary.
Fiarahamiasa avy amin’ny zandary misahana amin’ny fikarohana any Maroantsetra sy ny eto Toamasina no nahazahoam-bokatra izao.
Raha natao ny fisavana taorian’ny fisamborana dia vola 7 000 000 ariary no sisa teny aminy amin’ny ilay vola 35 000 000 ariary lasany sy karampanondro sandoka iray ary tongolo 17 gony izay novidiny tanatin’ny ilay vola
VAVIROA Marcelline : 02-08-2016 - 12:03